Kiss Umfana Girl Pendant Fashion Engagqwali Jewelry Setha i-Valentine - China Jinyun Ubucwebe
steel wire bamabhengele
Chain isixhumanisi namasongo
Buka Band Namasongo
Engagqwali imigexo Imisa
Amatshe Semi-eziyigugu Jewelry Imisa
Imihlobiso nge Emaketangeni
Semi-eziyigugu Stones Imihlobiso
steel umbala izindandatho
Kiss Umfana Girl Pendant Fashion Engagqwali Jewelry Setha i-Valentine
intengo / $: 1,2835
isisindo / g: 7.2
Thumela i-imeyli kithi Imikhiqizo Latest Download as PDF
Mayelana nathi Julong Jewelry yasungulwa ngo 2006. Inkampani yethu itholakala e Guangzhou, China. Sesiphila ezikhethekile ku Engagqwali Jewelry Isitolo esidayisa yonke impahla by B2B futhi iminyaka engaphezu kwengu-10 zebhizinisi e kulo mugqa. Kuze kube manje, besilokhu babebambisene abahlinzeki ezingaphezu kuka-300 kusukela ngaleso sikhathi futhi ukuba elula kunazo ukukhokhelwa indlela, amanani angcono kanye namasevisi kumakhasimende ethu. Kunezinhlobo ezingaphezu kuka-100,000 imiklamo ehlukahlukene ungathola kusuka website yethu, www.julongsteeljewelry.com . Zonke izindlela ezintsha kuzobuyekezwa ngu isonto ngalinye kuze kuphele cishe abangaphezu kuka imikhiqizo 2000pcs entsha. Imikhiqizo ukwakha ezihlukahlukene kukhona kabanzi kakhulu futhi onganelisa ngokugcwele amakhasimende amaningi sihluke izidingo emazweni ahlukahlukene. Sine kuka 10,000 ilungu olubhalisiwe kuthiwa kusuka emhlabeni wonke, bona ngokuvamile ukwenza ngendlela evamile kabusha isitokwe okuyinto kubalethele eziningi elula njengoba amakhasimende ethu badinga kuphela mayelana 3-15 izinsuku ukuthola izimpahla zabo.
Sinikeza aphansi kakhulu izindleko izinto ezilula futhi eziwusizo yokukhokha indlela, ezifana Pay-pal, EFT, inyunyana Western futhi Imali igremu. Uma unesithakazelo, sicela ungangabazi ukuxhumana nathi. Email: julong@julongsteeljewelry.com Whatsapp: +86 18028698162 Ozithobayo Yiziphi imininingwane umkhiqizo wakho? . Material: izinga okusezingeni insimbi engagqwali . Izici: akukho nickel, okuhola nokugqwala, ukuvikela isikhumba . Njengoba iklanyelwe i-wear siqu noma ubaba, umama, umngane, umbhangqwana, umbhangqwana Christmas, Halloween, usuku lokuzalwa, izipho weminyaka. . 1 00% ihlolwe, 100% izinga okuqinisekisiwe! . Sebenzisa esibukweni ezipholisha, ukuze ebusweni isicwebezelisi ukuthungwa ngaphezulu. . Ngemva ukugaya eminingi emihle, okungenaphutha. Flat ngaphandle protrusion. Kungani uye wakhetha inkampani yakho? Imikhiqizo Main - elengayo ubuhlalu, namasongo, namasongo, nezindandatho, namacici, imigexo, amasongo okhiye, njll
Abahlukahlukene engagqwali izesekeli steel. Imodeli yebhizinisi - thina a professional futhi abanolwazi imigexo nomkhiqizi kusukela 2006. Ukulawula ikhwalithi - esinalo izinga esiqinile ukulawula izinqubo ezine futhi ziyakwethemba kuphela umthwalo wethu. R & D - sinawo iqembu lochwepheshe of abalingani abaqaphela imfashini izesekeli. Inqubomgomo yokubuyisela imali isici - - thina nizolilalela hlola zonke izimpahla 3 izinqubo ingakafiki imithwalo. Uma kukhona noma iyiphi inkinga izinga ngenxa kwezidingo, sicela usazise ngesikhathi (ngaphakathi ezingu-15 ngemuva kokuba uthole iphakethe). Sizokwenza ukubuyisa imali yakho noma ithathe isikhundla sakho wena ngokulandelana esilandelayo.
Siyabonga nophenyo. Singabantu insimbi engagqwali ubucwebe nomkhiqizi futhi elithengisa, ngakho moq yethu USD 300, 3 PC design ngayinye usayizi ngayinye. Kodwa uma ngempela kudingeka isampula ukuhlola, ungakwazi oda USD 100 okungenani, izindleko lokuthumela imayelana USD 30 1 kg. Wish singakha ibhizinisi kangcono futhi ubungane. Ozithobayo Bella
Xhumana nathi Thina ngaso sonke isikhathi nginothile esandleni ukuphendula imibuzo yakho. Sikholelwa nesikhathi kwamakhasimende, futhi uyokwenza konke okusemandleni ukwanelisa amakhasimende ethu. Uma uneminye izinkinga, imibono, noma iziphakamiso, sicela uxhumane nathi. imeyili: julong@julongsteeljewelry.com Ubulungu Izinga: (accoring oda lemali yakho, uyojabulela ezahlukene ezingeni disccount) Level1 5% Level2 8% Level3 10% Level4 12% Level5 15% Level6 18% Level7 20%
Kepha thina asamukelanga oda ezingasho nsuku zonke, thina kushintshwe inqubo yethu yokusebenza ukuze ukunikeza isevisi kangcono amakhasimende ethu futhi uqiniseke amakhasimende ethu bangathola oda ngesikhathi. Ukulandela izinyathelo zethu ezintsha zokusebenza: (Ngokusho Bejing Isikhathi) 1. Njalo ekuseni, zonke oda amasha okuyinto zikhokhelwa kakade ngaphambi 12:00 emini, sizobe zihlele futhi uhlole isitokwe ngesikhathi ngosuku olufanayo. Uma ukwenza inkokhelo emva 12:00 emini, sizobe zihlele futhi uhlole isitokwe ngosuku olulandelayo. 2. Ngemva oyitholile uhlu ukupakisha, uma ungenza inkokhelo yokugcina ngaphambi 6:00 pm, singakwazi ngomkhumbi out oda ngesikhathi busuku. Uma ukwenza inkokhelo ngemva 6:00 pm, sizokwenza ngomkhumbi out oda ngosuku olulandelayo. 3.For oda zazo ikhokhwe kakade, uma ngabe uzenze ngokungeza oda ngokuqedela ibhalansi phambi 12:00 emini, sizokuthumela lokugcina uhlu nokupakisha ngesikhathi langa ngomkhumbi out oda ngosuku olulandelayo. Uma wenze oda ngokungeza ngokuqedela ibhalansi emva 12:00 emini, sizobe zihlele oda nokungeza ukuthumela lokugcina uhlu nokupakisha ngosuku olulandelayo kuwe futhi i-oda kuyoba ngomkhumbi ngemuva kusasa. Ngaphambi kokwenza oda, sicela hlela ngomusa isikhathi kuye ngesimo sakho siqu. Siyaxolisa lula oholele kuwe. Uma unemibuzo, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi. Siyabonga. Ozithobayo.
PayPal akhawunti: julong@julongsteeljewelry.com i-Western Union Sicela uxhumane nathi ngaphambi kokuba wenze ukukhokhelwa by inyunyana entshonalanga, ukuhlola negama owamukelayo sika. Ukudluliselwa ebhange Imininingwane akhawunti Inkampani
Yomhlomuli Igama lebhange HSBC
Ikhodi yasebhange 004
Igama Lenkampani Jinyun Trade Limited
I-akhawunti yasebhange kungekho 801406885838
yomhlomuli Bank 1 Queen Road Central, Hong Kong
Ikhodi ye-swift HSBCHKHHHKH
Ukuthumela Yemfihlo We ngomkhumbi kunoma ikheli emhlabeni. Izinto ngaphambilini ngathi ezithunyelwa nge-EMS noma TNT noma DHL noma FedEx noma UPS. We uzokwazisa nge ethungatha Cha nge e-mail ngokushesha njengoba i-oda lakho yathunyelwa lapho sithola ke kusukela inkampani express. Ikheli lomgwaqo liyadingeka ukuthunyelwa. Thengela ukudayisa uthole inzuzo izothunyelwa ejwayelekile umnyango Air kukhiphe umnyango, okuyinto ethatha cishe 3-5 izinsuku zokusebenza. Isikhathi Delivery ungafaki processing time. Imikhiqizo yethu yathunyelwa nsuku zonke, kusukela ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu, ngaphandle namaholide. Ama-oda Iningi ibekwe ngezinsuku zeviki uzobe athunyelwa izinsuku 2 noma 3, kuyilapho ama-oda afakwe ngezimpelasonto uzobe ezithunyelwa NgoMsombuluko elandelayo. Uzothola i isiqinisekiso e-mail nenombolo yakho yokulandelela. Amahora amabili nane emva kokuba uthole inombolo yakho yokulandelela, uyokwazi ukulandelela oda lakho ku-intanethi ku http://www.ems.com.cn/english-map.jsp http://www.tnt.com http: / /www.dhl.com/en.html http://www.ups.com/en.html http://www.fedex.com ziyahlukahluka neSikhathi sokudiliva kuye ezweni uya khona.
Ukuthumela Izindlela Delivery Zethu julong imigexo uyakhile ngokubambisana okuqinile nazo zonke ezinkulu izinkampani ezine lokuthumela: DHL, UPS, FedEx futhi TNT ukuhlinzeka professional umnyango ngemuti ukulethwa emhlabeni wonke. Isikhathi sokuthumela Izinto zizosuswa yathunyelwa ezinsukwini ezilandelayo ibhizinisi ngemuva kokuthi ngahlola. Ngokuvamile, kungase kuthathe izinsuku zebhizinisi ezingu-3-5 ukuthunyelwa, kuncike ukulethwa ezahlukene kusho ukuthi ukhetha. Asingene for ikheli elingalungile noma ayithumeleki. Sicela uqinisekise ikheli lakho lokuthumela ilungile futhi okungase kwenziwe. Oda Tracking Sivumela ukulandelela oda lakho ngesikhathi Ngokucifiza i-mouse. Lapho ukuhambisa kwakho kuqinisekisiwe, uzothola inombolo zokulandela isiqinisekiso lakho le-imeyili. Kuyoze kube nini ukuthatha into yami ukuze ufinyelele kimi? Sicela uqaphele ukuthi izinsuku zebhizinisi, kungafaki uMgqibelo, iSonto kanye Public Holidays, kubalwa ngokuya ukulethwa isikhathi. Ngokuvamile, kuthatha cishe izinsuku zebhizinisi ezingu 3-5 for kwezidingo. Ngingayithola kanjani umkhondo mpahla yami? We ngomkhumbi ukuthenga kwakho ngaphambi kokuphela kosuku yebhizinisi olulandelayo emva uke ungene phandle. Sithanda uthumele ie-mail ne inombolo yokulandelela ukuze ukwazi ukuhlola ukuqhubeka ukulethwa yakho ngesikhathi 'iwebhusayithi yenethiwekhi. Yini okufanele ngiyenze uma mpahla lami aziphindanga ifika? Sicela uvumele kufika izinsuku ezingu-10 zebhizinisi yento yakho ukuze sikhululwe. Uma ingafiki, sicela wazise nathi ngokuchofoza inkinobho ethi "Contact Us" kuwebhusayithi. Sizokwenza uthole emuva kuwe ngokushesha.
Previous: Engagqwali Couple Jewelry Couple Chinese Love Fashion Heart Pendant
Okulandelayo: Entsha Korea isitayela insimbi engagqwali abathandi ukhiye inhliziyo yokuvala elengayo
Izintelezi & Imihlobiso
ngokwezifiso Stainless Pendant
Loving Umkhaya Pendant
eliphucuziwe Fancy Cross Pendant
Engagqwali Cross Pendant
Engagqwali diffuser Pendant
Engagqwali Imihlobiso Izintelezi
Engagqwali Sun Pendant
Isitolo esidayisa yonke impahla Aroma diffuser Pendant
Isitolo esidayisa yonke impahla Engagqwali Imihlobiso
Engagqwali Incwadi Ngizinikela Kuwe Inhliziyo Tag ...
Entsha Korea isitayela insimbi engagqwali inhliziyo yokuvala ...
Isitolo esidayisa yonke impahla yokukhangisa Engagqwali Lover Ipeni ...
Factory ukuthengisa engagqwali ambalwa inhliziyo sh ...
Engagqwali Couple Jewelry Chinese Couple L ...
Pair Abesilisa Abesifazane Engagqwali Lover Couple Ne ...